Banyere Anyị - Shijiazhuang Dongmei ahịhịa Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Dongshen --- Iji ghọta Dongshen n'ichepụta ihe niile
Ndị otu nka siri ike
E hiwere Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. na 1986. Ọ bụ ụlọ ọrụ na -emepụta etemeete na ịkpụ afụ ọnụ na ijikọ ahịa/imewe na mmepụta. Ọ bụ ọkachamara na -emepụta ụdị ahịhịa etemeete / ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ. Anyị na-emepụta maka ahịhịa etemeete dị elu & ụdị ịkpụ afụ ọnụ OEM na mba ndị mepere emepe na Europe na United States, na-ahazi mmepụta ODM maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere, ọkara na nnukwu ndị ahịa. Ọtụtụ ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ na-arụkọ ọrụ ogologo oge ma kwụsie ike. Ndị ọrụ ọkachamara anyị na ndị na-emepụta ihe, na-elekwasị anya n'ịdị mma, na-ekwe nkwa, ma na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu nke ọma na nzaghachi ngwa ngwa. Anyị nwere ụdị Dongshen nke anyị, yana ọtụtụ patent imewe yana ike nrụpụta siri ike.
N'ihe karịrị ndị ọrụ 100, ụlọ ọrụ Dongshen na -ekpuchi mpaghara 15,000㎡. Anyị nwere ndị otu ọkachamara na -ere ahịa, otu teknụzụ na otu imewe dị ike, nke dị mma na nyocha na mmepe. Anyị nwere ụdị Dongshen nke mba anyị. Na mgbakwunye, anyị nwere akara ụlọ anyị KITTY EAR, nke ọkachamara na ahịhịa etemeete ma tinye n'ime echiche ahụike .Anyị enwetala asambodo FSC mba ụwa. Ndị ahịa azụmaahịa nwere ahụmịhe, ndị otu QA/QC iji hụ na mbufe ngwa ngwa yana ịdị mma dị elu.
Lekwasịrị anya na nyocha ụlọ ọrụ, ike nyocha, imepụta akụrụngwa, ngosipụta ndị ahịa iji hụ na nkwado ndị ahịa dị mma n'ụwa niile.
Ịkpụ afụ ọnụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Nịm etemeete ahịhịa, Mee Ncha, etemeete ahịhịa setịpụrụ,